နိမ့်ကျ ပွန်းပဲ့ လာသော စိတ်ဓါတ်များ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » နိမ့်ကျ ပွန်းပဲ့ လာသော စိတ်ဓါတ်များ …
နိမ့်ကျ ပွန်းပဲ့ လာသော စိတ်ဓါတ်များ …
Posted by etone on Aug 16, 2011 in My Dear Diary, Think Different | 19 comments
အမြီးကျက် အမြီးစား ၊ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား ... (ငါးတော့မဟုတ်ဘူး ပြောင်းဖူးဖြစ်နေတယ် ဟဲဟဲ )
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း စိတ်နည်းနည်းလေနေလို့ … စာတွေမရေးဖြစ်ဘူး … … ။ စာတွေရေးလျှင် စိတ်ထဲနှစ် ၊ ရင်နဲ့ ခံစားပြီးမှ ရေးတာမို့ … စိတ်လေနေတဲ့အ ချိန် အာရုံတွေ ပြန့်လွင့်နေတာ … ဝေလေလေစိတ်ကလွဲလို့ ဘာစိတ်ခံစားချက်မှ ရင်ထဲရောက်မလာခဲ့ဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းရာလေးတစ်ခုနဲ့ … မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်းရာလေးတွေ ဆက်စပ်ပြီး … ပြောပြချင်စိတ်ပြင်းပျလာတာကြောင့် … ဒီစာလေးကို ကောက်ခါ ငင်ကာ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ။
ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ပြည်ပ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေ အားကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အပါဝင် လူလတ်ပိုင်း အရွယ်ထိ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲ အစစ အရာရာ ပျော်ဝင်စီးမျောခဲ့ကြတယ် … ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာတွေ ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေကနေ မျောလွင့်လာတဲ့… ပြည်ပ နိုင်ငံတွေ အတိုင်း အ၀တ်အစား ၊ ဆံပင်ပုံစံ … ၊ အပြောအဆို ၊ အမူအယာမှ စလို့ .. အစားသောက်ထိအောင်ပဲ အားကျ ကျင့်သုံးကြပြန်တယ် …။ တကယ်တမ်း သင်ယူသင့်တဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ရှောင်ကွင်းသွားကြတယ် … ။ ဇာတ်လမ်းသဘောအရလည်း … မပီမပြင် ၀ါးတားတားကို … ။ ဒါဟာ မီဒီယာတွေကနေ ချပြတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေရဲ့ အသားပေးရိုက်ချက်တွေကြောင့်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် … ။
ယခုပြည်တွင်း အခြေစိုက် ရုပ်သံလိုင်း တစ်ခုကနေလာနေတဲ့ …. ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ အစီစဉ်တွေထဲမှာ … အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှူကိုပဲ အသားပေး ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကြီး ထုတ်လွှင့်နေတာတွေ့ရပါတယ် .. ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားမို့ လူကြိုက်များပေမဲ့ … ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေ မပေါ်ခင်ကတည်းက တစတစ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားလာတဲ့ ယောကျာ်းတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိခဲ့ပါတယ် … အခုဒီလို ရုပ်ရှင်တွေ ၊ ဇာတ်လမ်းတွေကလည်း မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ရော … ယခင်ကထက်ပိုပြီး ကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ ယောကျာ်းတွေ များလာတော့တာပါပဲ … ။
စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ မွေးရာပါ ဖြစ်တည်လာတာမျိုးပါ … မိဘ ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆီကနေ မျိုးရိုးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး … ဒီလိုပါပဲ … နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ လူမှူ အဆင့်တန်း အနိမ့်အမြင့်နဲ့လည်း မဆိုင်ပါပဲ .. စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျခြင်း ၊ ယုတ်ညံ့ခြင်းမျိုးဟာ အထက်တန်းလွှာ၊ အောက်တန်းလွှာ ၊ ပညာတတ် ၊ ပညာမဲ့ …လူတန်းစား မခွဲခြားပဲ ဖြစ်တည်နေမှူမျိုးပါ … လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးရာပါ စိတ်ဝိဥာဏ် … အကျင့် စရိုက် လို့ ခေါ်ရမလားပဲ .. ။ လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပါပဲ … လူတိုင်း ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ၊ ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ အားသန်ရာလမ်းကြောင်းအတိုင်း မျောလွင့်နေကြတာပါ … ဒါပေမဲ့လည်း … ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် သူများကို ဒုက္ခမပေးတဲ့ ဖြစ်အင်ဆိုလျှင်တော့ …အသက်ရှင် ရပ်တည်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲလွဲနိုင်တာပေါ့ … ။
တစ်ချို့လူတွေကျတော့လည်း ….၀ါသနာကိုက တဏှာကြီးလွန်းလှတယ် … တစ်ခါတစ်လေ မှန်းဆလို့ မရအောင်ပဲ စိတ်ထဲ ရောက်ယှက်ခတ်နေလောက်အောင် …. ၀ါသနာကြီးတယ် … ။မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ လက်ရှိဘ၀ကိုတောင် မေ့သွားလောက်တဲ့ အခြေနေမျိုးလေ … ကိုယ်က အိမ်ထောင်သည်လား ။ ကလေး အဖေလား ၊ တခုလပ်လား ၊ လူပျိုလား တောင် မမှတ်မိတော့တဲ့ အဖြစ် ။ အဆိုးဆုံး တွေကတော့ … ရည်စားတွေ မှိုလိုပေါက်အောင် ထားတတ်တဲ့ လူမျိုးနဲ့ … သူများရည်းစား ကြောင်တောင် နှိုက်ချင်တာမျိုးပါပဲ … ။ နှစ်မျိုးစလုံးက ယောကျာ်းကောင်းတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ အချက်ထဲ မပါပါဘူး … ။ မှိုလိုပေါက်အောင် မိန်းမရှုပ် ချင်တဲ့ လူကတော့ …ရုပ်ရှင်တွေ ထဲကလို …. ဟိုတယောက်ဘက် ပြေးကြောင်လိုက် .. ဒီတယောက်ဘက်ပြေးကြောင်လိုက်နဲ့ … ဘ၀ရပ်တည်မှူအတွက် ဘာမှ အာမခံချက် မရှိတဲ့ လူမျိုးပါပဲ..။ သူတို့မှာ သေချာတဲ့ အနာဂတ်လည်း မရှိသလို ရေရာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း မရှိလို့ .. ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စား လူမျိုး ဖြစ်ကြရတာပါပဲ … ။ တဖက်က ကောင်မလေးတွေလည်း အရူးလုပ်ခံရတာတောင် မယားငယ်အဖြစ်ခံပါမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ တွေ့လျှင်တော့ … ကိုယ်တော်ချောတို့က အကြိုက်ပေါ့ .. ။ တကယ် အကျင့်မကောင်း စိတ်ဓါတ်မမှန်ပဲ နိမ့်ကျတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ ယောကျာ်းတွေလို့ … ဘာလို့များ မတွေးမိကြတာလဲ …။ ချစ်တုန်းတော့ မွှန်နေလို့ မသိပေမဲ့ … ဘေးလူနေရာက ကြည့်ရသူတွေကတော့ .. သူတို့လေးတွေ အစားရင်မောလွန်းလို့ .. သက်ပြင်းချယုံကလွဲပြီး ဘာများပြောနိုင်ဦးမှာလည်း … ။ မနေနိုင်လို့ ကြားဝင်ဖြောင်းဖျဦး … ဒီမိန်းမ သူများကောင်းစားတာ မနာလိုလို့ ဆိုတာမျိုးပြောခံရပြီး … စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်နိုင်သေးတယ် .. ။ မိန်းကလေးငယ်တွေ … ဒီလိုမျိုး လေးလေးနက်နက် မတွေးပဲ မိုက်တွင်းနက်တာ …ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီး .. ရူးတာမဟုတ်ဘူးလို့ … ဘယ်သူ အတပ်ပြောနိုင်ပါ့မလဲ … ။မီဒီယာရုပ်သံလိုင်းတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှူက … ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်လျှင်တောင် ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကပဲ ဒီလို စိတ်တွေ ဖြစ်လာစေပါတယ် … ။ ပယောဂမကင်းဘူးပဲ ..။ ယောကျာ်းတွေကလည်း …ကိုယ်တိုင်က ပျိုပျို ၊အိုအို … ဘာမိသားစု တာဝန်မှ စိတ်ထဲ ထည့်မထား …မိဘ ၊ မျိုးရိုး ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ထည့်မတွက်ကြသလို တဖက်က မိန်းကလေးများရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေထား ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ စတာတွေ မစဉ်းစားပေးတတ်ကြဘူး .. ။ ဒီတော့ .. မိန်းမတွေ ကိုမေးချင်စမ်းပါတယ် … မျှော်လင့်ချက်ကြီးထားပြီး … မျက်နှာများတဲ့လူကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ … မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ရဲ့ လား … ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထုတ်ပြရဲ့လား ဆိုတာပါပဲ … ။ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းတွေကလို လစ်ဗင်း တူဂဲသား အခန်းငှားနေမယ် … သူလည်း သူကြိုက်တာသူလုပ် ကိုယ်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် ဆိုမျိုးက တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အဆင်ပြေပေမဲ့ … ကျွန်မတို့ နိုင်ငံလို ပစိပစပ်များ.. မစားရ အညှော်ခံ ၊ အရည်မရ အဖတ်မရ … ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ..အတင်းဖျင်းပြောတာ ၀ါသနာထုံလွန်းတဲ့ လူအများစုနေတဲ့ နေရာမျိုးမှာတော့…. ဘယ်လောက် မျက်နှာပြောင်တဲ့ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ….ကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူး .. ။ ဆုတ်လည်း စူး ၊ စားလည်း ရူးတဲ့ အခြေနေမျိုးမို့ … မိသားစုဘ၀ အာမခံချက် ဘာမှ မပေးနိုင်တဲ့၊ ကိုယ့်ကို အတည်တကျ လက်တွဲနိုင်မဲ့ ယောကျာ်းမျိုးမဟုတ်တဲ့ အတွက် … စောစော စီးစီးကပဲ လမ်းခွဲလိုက်ဖို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် … ။
အထက်မှာရေးပြခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ ယောကျာ်းတွေထဲမှာမှ စည်းမစောင့်တဲ့ လူတွေ ရှိပါသေးတယ်… ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မက ကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့လူလို့ .. ရေးခဲ့တာပေါ့ …ဘယ်လိုကြောင်တောင်နှိုက်ပါသလျှင်ဆိုလျှင် ….. ထိုလိုလူမျိုးကတော့ .. စည်းစောင့်တာတွေ ၊ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်တာတွေ နားလည်စွမ်း နည်းပါးတယ်…. ။ တကယ့်ကို စိတ်ဓါတ်က အနိမ့်ဆုံးမှာပါ … ။ သူများ မိန်းမ ကြာခိုတာမျိုး … ၊ သူငယ်ချင်းရည်းစား ဖြတ်ခုတ်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ … ။ ဘယ့်နှယ့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေရှိပါလျှက် သူများ မိန်းမ ကြာခိုရသလဲ … သူငယ်ချင်း၊ ညီအစ်ကိုရည်းစား ဖြတ်ခုတ်ရသလဲ မတွေးတတ်တော့ပါဘူး … ကြည့်ဖူးနေတဲ့ ကိုရီးယားကားထဲကလို အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာ ထမင်းစား ရေသောက် ဖြစ်နေကြပြီ ထင်ပါရဲ့…. ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ယောကျာ်း အရင့်မာကြီး ကဗီလိန်ဖြစ်သွားတာ ရှက်ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ အဖြစ်တွေ များသထက်များလာပါတယ်… ။ ရှက်တတ်လျှင် လဲသေဖို့ကောင်းတဲ့ ယောကျာ်းတွေ အတော်များနေကြပါပြီ … မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ပြင်ကြဖို့ပဲ တိုက်တွန်းပါတယ် …. ။
လှေခါးသုံးထစ်ဆင်းလျှင် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ရေးထားတဲ့… တဖက်စောင်းနင်း စကားပုံတွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး မျောလွင့်နေမဲ့အစား …… မိမိကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာရမယ်ဆိုလျှင် … ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့လည်း နှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ် … ဒီလောက် HIV, AIDS ရောဂါတွေ ကူးစက်နှုန်းမြင့်မားနေချိန်မှာ … ယောကျာ်းကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်လို့ ရူးကြောင် မူးကြောင် … ဟစ်ကြွေးမြည်တမ်းနေရမဲ့ အချိန်ခါလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး … အသံသာ ကျယ်ချင်ကျယ်လို့ရမယ် …. ရောဂါကတော့ မနေပါဘူး ဆိုတာ သတိနဲ့ယှဉ် ဆင်ခြင်ကြပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။
နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ဘ၀ကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့… ဒီပို့စ်ကို ရေးတာပါ … မိသားစုကို တန်ဖိုးထားတဲ့ မိန်းမတိုင်းနဲ့ စိတ်ကူးခြင်း ထပ်တူကျမယ်လို့ ထင်ပါရဲ့နော် .. ။
မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒီမီဒီယာလောကက ဘာတွေပညာပေးတွေ ပြနေသလဲဆိုတာ မိသားစု မောင်နှမတွေတောင် မကြည့်သင့်ကြတော့ဘူးဖြစ်လာနေပြီ။ လင်မယားတွေကွဲတယ် နောက် ဒီပြင်လူနဲ့တွဲတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးတွေဖောက်ပြန်တယ်။ ဒါတွေကို အခွေတွေအဖြစ်တောင်မဟုတ်ပဲ တီဗီကနေတောင် တိုက်ရိုက် ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ပြလာကြတာ တော်တော်ကို မကြည့်သင့် မကြည့်အပ်ဘူး ထင်မြင်မိတာပါပဲ။ နောက် ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်လား မစဉ်းစား ဘယ်လိုဒါရိုက်တာတွေကများ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ ရိုက်ကူးဖော်ပြ ပညာပေးနေလဲဆိုတာ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကြည့်တဲ့သူလည်း အိပ်ရေးပျက်ရုံကလွဲလို့ တခြား ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။ ဒါကို လူငယ်တွေက အတုမြင် အတတ်သင် ဘ၀ကို ဖျက်စီးနေကြတာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ…..
ယောက်ကျားအများစုကတော့ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်သလို မဟာယောက်ကျားဝါဒကိုလက်ကိုင်ထားနေဆဲဖြစ်သလို ညီမလေး(ညလေး)လုပ်ချင်သူများကလည်း ကိုရီးယားကားတွေ ယားတိုင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချစ်စကားစပြောတဲ့ အထာတွေကိုတောင် ကိုယ့်ဓလေ့လိုလို ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြပါပြီ လို့ လက်လှမ်းမီသလောက်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ ၀င်ဖောလိုက်ပါတယ်။
MRTV-4 က ပြနေတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ပထမလူနဲ့ ကွဲ.. နောက်လူနဲ့ ညား..
တနေ့ကတောင် သူငယ်ချင်းတွေက ပြောနေသေးတယ် ဘာရုပ်ရှင်တွေ လာနေမှန်း မသိဘူး သူများ ယောင်္ကျား လု ယူတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေကြီးပဲ လာနေတာ အမြင်တောင် ကတ်လာပြီတဲ့… သူပြောမှ သွားသတိရတယ်.. လာနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ.. စိတ်ပျက်စရာ ကြီးပါ.. အနူပညာလက်ရာမြောက်တော့ ဇတ်လမ်းက ဒီနေ့ ပြီးရင် နောက်နေ့ ဆက်ကြည့်ချင်တယ်။ ဟိဟိ..
ဟုတ်ပ့ါ ဆူးရေ။ သူတို့ရဲ့ စရိုက်တွေ ရိုက်ပြတာကို လက်မခံချင်ပေမယ့် အနုပညာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ တနေ့တနေ့ စောင့်ကြည့်ရတာ အမောပဲ။
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲကအတိုင်း အခု ရန်ကုန်မှာ တကယ်ဖြစ်နေကြတယ် … အနုပညာအနေနဲ့ ကြည့်ကောင်းပေမယ့် အတုယူကြတာတော့ မကောင်းဘူး …
ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်း မသိအောင်ပါပဲ
ကျွန်တော် က တော့
တစ်ခြားမိန်းမ တစ်ယောက်ယောက် များ
ချက်ချင်း ကိုယ့်မိန်းမ နဲ့ 
သမီးရည်းစား ဘ၀ ကို
အခုခေတ် က လဲ အလန်းအလန်း တွေ ဆိုတော့
ဟို ကြေငြာထဲ က စာသားကိုလဲ ဆွဲ တွေးရတာပေါ့
မြင်ရုံနဲ့ သန့် တယ် လို့ ပြောလို့ ရမလားပေါ့ ( စိတ်ကူးကို )
ကိုယ့် မိန်းမ ကို ကိုယ်ချစ်လွန်းတော့
ကျွန်တော် ကျင့်သုံးတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ
ကောင်းလိုက်လေ တူမောင်ရယ် ..။
“တစ်ခြားမိန်းမ တစ်ယောက်ယောက် များ
စိတ်ဆိုတာ မကောင်းရာမှာ ညွှတ်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။
ယောကျာ်းတိုင်း မောင်ပေလိုမျိုး စိတ်ဓါတ်ထားလျှင် တဘက်က မိန်းကလေးအပေါ်ရော …ကိုယ့်ဇနီးမယားအပေါ်ရော အပြစ်လုပ်မိရာမကျတော့ဘူး … ။ အဲ့ဒီလို စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိလို့ ၀မ်းသာပါတယ် မောင်ပေရေ …. ။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်ကိစ္စတွေက ရေတက်ငါးဇရိုင်းလိုပါပဲ .. ခဏပါ… တကယ်တမ်း ဆိုးတူ ကောင်းတူ နေရမှာက ကိုယ့်မိသားစုပဲလေ … ။ မိသားစုဘ၀ကို တန်ဖိုးထားပါ ။
ဟုတ်ပါ့..ဟုတ်ပါ့.. ကိုးရီးယားကားတွေက မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး.
သူတို့ က အသေအချာကို ရိုက်ပြထားတာပါ .. ဥပမာ.. ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းဆိုလည်း..
(အတိအကျပြောရရင်..မြန်မာကားတွေမှာ တွေ့လေ့မရှိတဲ့) အလုပ် စနစ်ကျမှုမျိုး.. သေသပ်မှုမျိုး.
ရှေ့နေကားဆိုရင်လည်း.. ရှေ့နေကား.. ပီပြင်တယ်.. သူတို့အလုပ်လုပ်တာတိကျတာ ဘာညာအဲလိုမျိုးတွေ ပါတယ်ပေါ့.. ဗဟုသုတတွေပေါ့.
ဒါပေမယ့်.. အထက်ကပြောသလိုမျိုး.. အဲ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာပေါ.
လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း..သူ့ရည်းစားငါလုမယ်.. ငါ့ရည်းစားဟိုကောင်လုသွားပီ ဆိုတာတွေချည်းပဲ..
မြန်မာအ၀တ်အစားအတွက် .. ဂုဏ်ယူပါဆိုတဲ့စကားတွေကို .. လှောင်နေသလိုလို..
ကျနော့်အနေနဲ့မြင်တာကတော့ .ကိုးရီးယားကားကြည့်တာ.. ကောင်းပါတယ်..
ထုံးစံအတိုင်းပဲလေ.. ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကျတော့ အတုမယူကြဘဲနဲ့..
မကောင်းတဲ့.. တော်ပါပီလေ..ကျနော် ဆက်မပြောတော့ပါဘူး.. လူတိုင်းသိကြပါတယ်.. (လက်ညောင်းလာလို့ ဟိ) .. ကျနော်သာအာဏာရှိလို့ကတော့.. အဲခွေတွေ အကုန်သိမ်းလိုက်ချင်တယ်.
အပျင်းပြေသာကြည့်နေကြတာ.. ကောင်းကျိုးအတွက်တော့.. အတုမယူကြချင်ဘူး.
ဒုသနသော တဲ့ ၊ မကောင်းပါဘူး၊ ဘုရားရှင် ဟောထားတော်မူပါတယ်၊ အဝီဇိကိုဇောက်ထိုးကျပါမယ်၊
ယောင်္ကျားတွေလဲယောင်္ကျားတွေမို့ ၊ မိန်းမတွေလဲ မိန်းမတွေမို့ ပါပဲ၊ အားလုံးကိုသိမ်းကျုံးပြီး
ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ မကောင်းတဲ့သူတွေ ဟာ မကောင်းတဲ့အပစ်ဒဏ်ခံရမှာပါ။
ကျွန်တော်လဲ မနေနိင်လို့ ၀င်ပြောအုံးမယ် ဘယ်က စပြောရမလဲ ဟိုလေ ….၀ီကလီးအလဲဗင်း ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါလာတယ် အမျိုးသမီးတွေ မလေးရှား စင်္ကာပူ တို့လို ကိုရီးယား ကိုလဲ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့အကြောင်း ကိုရီးယားတွေက မယား လိုချင်လို့ ထိုင်း ၊ ဗီယနမ် ၊ ကမ္ဘောဒီးယာ စတဲ့ နိင်ငံတွေမှာ အေးဂျင့်ဖွင့်ပြီး ရှာနေကြတာ လွတ်လိုက်ပါ (_ာ ) မဖြစ်ရင် ကြိုက်သလိုပြော အာမခံတယ်…. အကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပါနော် …
ကြိုးစားကြရာမှာ မီဒီယာကပေးတဲ့ ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုး
အတုယူမှားစေမယ့် ဇတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေကျတော့ မီဒီယာတွေကပြတယ်
ဘာမဟုတ်တဲ့ ဗိုက်သားလေးခြေသလုံးသားလေးပေါ်တဲ့ ဟာတွေ ယောက်ျားလေး
ဆံပင်နည်းနည်းရှည်ရင် နားကပ်ပန်ထားရင်shade ထိုးပြီင်္းပြတယ်ဘာမဟုတ်တာကျဆင်ဆာလိုက်ဖြတ်တယ်
ဇာတ်လမ်းကျတော့ဆင်ဆာမဖြတ်ဘူး ဇာတ်လမ်းက လင်ငယ်မယားငယ် ဇာတ်လမ်း
စပွန်ဆာလဲ ယူတော့ယူတာပေါ့ အဲလောက်ကြီး ကျတော့ မကောင်းတော့ဘူး
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေ သတိရမိသေးတော့တယ်
လူဆိုးနှိမ်နှင်းရေးဇာတ်လမ်းတွဲ blue thunder တို့ the little house in the preay တို့
treasure island တို့ the sistmillion dollar men တို့ mathure star တို့ fortune hunter တို့
အီးတုံးပြောပုံအတိုင်းဆို မြန်မာပြည်မှာပြနေတဲ့ ကိုရီးယားကားဆိုတာ အညှီအဟောက်အသားပေး ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အညှီရှိမှ ယင်အုံလာဆိုသလို လူဆိုတာလည်း အဲလိုမျိုးမှ ကြိုက်တာကိုး။ တဖက်ကိုပိတ် တဖက်ကိုဖွင့်ပေးထားတဲ့ အစိုးရပေါ်လစီရဲ့ ရလဒ်တွေပေါ့။ မဆလတုံးကလို နှစ်ဖက်စလုံးပိတ်ထားရင် အထွေထွေမကျေနပ်မှုဖြစ်ပြီး အုံကြွမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိထားတယ်လေ။ ဒီတော့ ခံကြပေါ့…..။ ကြောင်ကြီးတို့က သဂျီးတို့တိုင်းပြည်မှာ အနေသာကြီး၊ ကိုဘေးနွားကင်၊ ဘတ်ဒ်ဝိုက်ဆာ ဘီယာလေးနဲ့ လေချဉ်လေးတက်လျက်….အေ့။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကို အပန်းဖြေယုံသက်သက် အနေနဲ့ကြည့်ရင် ဘာမှပြောစရာမရှိပင်မယ့်
အခုဟာက အတုယူစရာမဟုတ်တာကို အတုယူနေကြတာဆိုတော့ တွေးကြည့်ရင် ရင်မောစရာပါပဲ …
မောင်ဘလှိုင်တို့ကတော့ ကိုဒီးယား ဇာတ်လမ်းဒွဲဒွေ
လုံးဝမကြည့်ပါ။ အမြီးကျက် အမြီးစားတော့ မဟုတ်ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြှောက်ပြောရရင် ရုပ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကလွဲလို့..
အင်း…ကျန်တာလည်း သိပ်ကောင်းလှတာ မဟုတ်ဘူး..
ယောက်ကျားတစ်မျိုးတည်း အပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ ၊မိန်းမတွေလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး ။အဲဒါ ဆာမိ ကိုယ်တွေ့ ၊ယောက်ကျားကမြင်းရင်လူသိတယ် မိန်းမကြတော့ – – – အထူးသဖြင့် မိန်းမချင်း သိနိုင်ခဲတယ် ၊သင်္ကြန်မှာ တွေ့မှာပေါ့ မိန်းမတွေ မူးနေကြ တာ ၊ ဒါလဲ ကိုရီး ယားလက်ချက်ပဲ – – ကိုရီးယား ကား အများဆုံးကြည့် တာ မ မ တို့ ပါ ဗျာ၊ တကယ် တော့ ဘယ်သူမဆို မှား တတ် ကြပါတယ် ။ ဆာမိ အလုပ် လုပ် တာက မြို့သစ် မှာ ၊ အခြေခံ လူ တန်းစား အများစု နဲ့ နေ့စဉ် ဆက်ဆံ ရတာ ။ သူတို့ ထဲကတချို့ရဲ့အမြင် မှာ ကာရာအိုကေ ၊ ဗြူ တီ ဆလွန်း တွေ မှာ အလုပ် လုပ် ရ တာအေးဆေး ပဲ ၊ ရှက် စရာ လို့မထင်ကြဘူး ။။ ဆာမိလည်း တစ် ခါ တုန်း က ဖျာ ရောင်း ခံ ခဲ့ရ ဖူး တယ် မြို့သစ်မှာမဟုတ် ပါဘူး။ ပညာ တတ် အသိုင်း အဝိုင်း တစ်ခု မှာ ပါ ။ဆာမိက စာ ရိုက်ညံ့ တယ် ဒါကြောင့် နောက်မှ ပဲ ကိုယ်တွေ့တွေ ရေး ပြ တော့ မယ် ။။။ ဆာမိ ကား သမား ဘဝ က ခတ်ဆိုး ဆိုး မိန်းမတွေ မြင်ဘူး ခဲ့ ပါတယ်
ကိုရီးယား ကားတွေက ကောင်းတာတွေ ရှိတယ်
(၂) လုပ်ငန်းခွင်မှာ စည်းစနစ် ရှိတယ်
(၃) အလုပ်လုပ်တာ ပြိုင်ဆိုင်ချင်စိတ် ရှိတယ်
(၄) ရှုခင်းအသစ်တွေ များများတွေ့ရတယ်
(၁) မိန်းမက စ ကြိုက်တယ်ဆိုတာကို ဖွင့်ပြောရဲကြတယ်
(၂) သူများ ကြိုက်နေတာကို မြင် သိ နေရဲ့သားနဲ့ ဗြောင် ၀င်လုတယ်
(၃) လုရဲမှ ယောက်ျားရမယ်
(၄) အမေတချို့ကလဲ ပေါတောတောနဲ့ သမီးပြောသမျှ လိုက်လုပ်တယ်
(၅) ရိုက်နှက်နေကြရင် မြန်မာကားတွေလိုပဲ ရဲ လာတာ မတွေ့ဘူး
အတုယူသင့်တာထက် မယူသင့်တာ နည်းနည်းများနေတော့ ကလေးတွေ ကြိုက်ပေမယ့်